1 Samueri 17 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Motu Mutauro Wemasaini WekuJamaica Mutauro Wemasaini wechiBelgian French Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wechiSwiss German Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuIreland Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSlovenia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Navajo Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pennsylvania German Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zulu
Bhuku Rekutanga raSamueri 17:1-58
Dhavhidhi anokunda Goriyati (1-58)
Goriyati anoshora vaIsraeri (8-10)
Dhavhidhi anozvipira kumurwisa (32-37)
Dhavhidhi anorwa muzita raJehovha (45-47)
17 VaFiristiya+ vakaunganidza mauto avo* kuti varwe. Vakaungana paguta rinonzi Soko,+ raJudha, vakadzika musasa pakati peSoko neAzeka,+ muEfesi-dhamimu.+ 2 Sauro nevarume veIsraeri vakaungana, vakadzika musasa muBani reEraa,+ vakaronga mauto avo kuti vasangane nevaFiristiya. 3 VaFiristiya vakanga vari mugomo kune rimwe divi, vaIsraeri vari mugomo kune rimwe divi, pakati pavo paine bani. 4 Mumwe murume aiva shasha yekurwa akabva abuda mumisasa yevaFiristiya; ainzi Goriyati,+ ari wekuGati,+ uye akanga akareba mamita anenge matatu.* 5 Aiva nengowani yemhangura mumusoro, uye akanga akapfeka nguo yekuzvidzivirira nayo yaiva nemakwati emhangura+ aipindana-pindana. Nguo yacho yairema mashekeri 5 000.* 6 Pamipimbiri yake paiva nezvinodzivirira zvemhangura uye aiva akabereka pfumo diki+ remhangura kumusana kwake. 7 Mubato wemuti wepfumo rake guru wakanga wakaita sedanda revanogadzira machira,+ muromo wesimbi wepfumo rake wairema mashekeri 600;* uye mutakuri wenhoo yake aifamba ari pamberi pake. 8 Akabva amira, ndokushevedzera kuuto rakarongwa revaIsraeri+ achiti: “Nei mabuda kuti muronge uto renyu? Handiti ini ndiri muFiristiya, uye imi muri varanda vaSauro. Saka sarudzai murume, uye ngaadzike kuno kwandiri. 9 Kana akakwanisa kurwa neni ondiuraya, tichabva tava varanda venyu. Asi kana ndikamukunda ndomuuraya, imi muchava varanda vedu motishandira.” 10 MuFiristiya wacho akabva ati: “Ini ndinoshora uto rakarongwa raIsraeri+ nhasi. Ndipei murume tirwe!” 11 Sauro nevaIsraeri vese pavakanzwa mashoko aya emuFiristiya wacho, vakavhunduka uye vakatya chaizvo. 12 Zvino Dhavhidhi akanga ari mwanakomana wemumwe muEfrata+ wekuBhetrehema+ raJudha ainzi Jese+ uyo aiva nevanakomana 8,+ uye mumazuva aSauro murume wacho akanga atokwegura. 13 Vanakomana vakuru vatatu vaJese vakanga vaenda naSauro kuhondo.+ Vanakomana vake vatatu vakaenda kuhondo vaiva Eriyabhi+ uyo aiva dangwe, Abhinadhabhi+ uyo aiva mwanakomana wake wechipiri, naShamaa+ uyo aiva wechitatu. 14 Dhavhidhi ndiye akanga ari mudiki kune vese,+ uye vakuru vacho vatatu vakaenda naSauro. 15 Dhavhidhi aiti akamboenda kwaSauro, odzokera kunofudza makwai+ ababa vake kuBhetrehema. 16 Munguva iyi, muFiristiya wacho aiuya omira pamberi pavo mangwanani ega ega nemanheru kwemazuva 40. 17 Jese akabva ati kumwanakomana wake Dhavhidhi: “Ndapota, tora efa* iyi yezviyo* zvakakangwa nezvingwa izvi gumi, uye kurumidza kuzviendesa kuvakoma vako kumusasa. 18 Uye tora zvidimbu izvi gumi zvechizi* unopa mukuru wechiuru; uyewo unofanira kunoona kuti vakoma vako vakadii wouya nechinhu chinobva kwavari chinoratidza kuti vapenyu.” 19 Vakoma vake vaiva naSauro nevamwe varume vese veIsraeri muBani reEraa,+ kuti varwe nevaFiristiya.+ 20 Saka Dhavhidhi akafumomuka, akasiya mumwe munhu achichengeta makwai; akabva arongedza ndokuenda sezvaakanga arayirwa naJese. Paakasvika kunoperera musasa, uto rakanga richienda kunzvimbo yekurwira, richishevedzera zvinotyisa. 21 VaIsraeri nevaFiristiya vakabva varonga mauto avo, zvekuti mauto avo akabva amira akatarisana. 22 Dhavhidhi akabva angosiya zvinhu zvake zvichichengetwa nemunhu aichengeta nhumbi, akamhanya achienda kunzvimbo yekurwira. Paakasvika, akatanga kubvunza kuti vakoma vake vakadii.+ 23 Paaitaura navo, vakaona shasha iya yekurwa yainzi Goriyati,+ muFiristiya wekuGati. Murume wacho akabuda mumauto akarongwa evaFiristiya, akataura mashoko akafanana neaakanga ambotaura,+ uye Dhavhidhi akanzwa zvaakataura. 24 Varume vese veIsraeri, pavakaona murume wacho, vakamutiza, vachitya chaizvo.+ 25 Varume veIsraeri vaiti: “Maona here murume uyo ari kubuda uko? Anouya achishora vaIsraeri.+ Mambo achapa pfuma yakawanda kumurume anomuuraya, achamupa mwanasikana wake,+ uye achasunungura imba yababa vake pazvinhu zvinofanira kuitirwa mambo nevaIsraeri.” 26 Dhavhidhi akatanga kuti kuvarume vakanga vakamira pedyo naye: “Murume anouraya muFiristiya uyo obvisa kuzvidzwa pavaIsraeri achaitirwei? Nekuti muFiristiya uyu asina kuchecheudzwa ndiani kuti ashore uto rakarongwa raMwari mupenyu?”+ 27 Vanhu vacho vakabva vamuudza zvakanga zvataurwa, vachiti: “Izvi ndizvo zvichaitirwa murume anomuuraya.” 28 Mukoma wake mukuru Eriyabhi+ paakanzwa Dhavhidhi achitaura nevarume vacho, akamutsamwira uye akati: “Wavingei kuno? Wasiya naani makwai mashoma aya murenje?+ Ndinonyatsoziva kuzvikudza kwako nekuipa kwemwoyo wako; wauya kuzongoona hondo chete.” 29 Dhavhidhi akati: “Ko ndaita sei? Ndanga ndichingobvunzawo zvangu!” 30 Saka akatendeuka achibva paari akatarisa kune mumwe munhu, akabvunza zvaakanga ambobvunza,+ uye vanhu vakamupindura sezvavakanga vamboita.+ 31 Mashoko akanga ataurwa naDhavhidhi akapinda munzeve dzevamwe vanhu, vakanoudza Sauro. Saka akaita kuti anoshevedzwa. 32 Dhavhidhi akati kuna Sauro: “Ngaparege kuva nemunhu anotya muFiristiya uyu. Muranda wenyu achaenda kunorwa naye.”+ 33 Asi Sauro akati kuna Dhavhidhi: “Haukwanisi kuenda kunorwa nemuFiristiya uyu, nekuti unongovawo hako mukomana,+ asi iye murwi* kubvira achiri mudiki.” 34 Dhavhidhi akabva ati kuna Sauro: “Muranda wenyu aifudza makwai ababa vake, uye pakauya shumba+ ikatora gwai kubva muboka. Pane imwe nguva pakauyawo bheya rikaitawo saizvozvo. 35 Asi ndakabuda, ndikazvitevera, ndikazviuraya, ndikanunura makwai acho pamiromo yazvo. Pazvakatanga kundirwisa, ndakabata mvere dzazvo,* ndikazviwisira pasi, ndikazviuraya. 36 Muranda wenyu akauraya shumba nebheya, uye muFiristiya uyu asina kuchecheudzwa achafanana nazvo, nekuti ashora mauto akarongwa aMwari mupenyu.”+ 37 Dhavhidhi akabva awedzera kuti: “Jehovha, uyo akandinunura panzara dzeshumba nedzebheya, ndiye achandinunura paruoko rwemuFiristiya uyu.”+ Sauro akabva ati kuna Dhavhidhi: “Enda, uye Jehovha ngaave newe.” 38 Sauro akabva atora nguo dzake akadzipfekedza Dhavhidhi. Akamupfekedza ngowani yemhangura mumusoro, achibva amupfekedza nguo yemurwi yesimbi. 39 Dhavhidhi akabva asungira bakatwa rake panguo dzake akaedza kuenda asi akatadza, nekuti akanga asina kudzijaira. Dhavhidhi akati kuna Sauro: “Handikwanisi kuenda ndakapfeka zvinhu izvi, nekuti handina kuzvijaira.” Saka Dhavhidhi akazvibvisa. 40 Akabva atora tsvimbo yake, akasarudza hurungudo* shanu murukova, akadziisa muhomwe yenhava yake yemufudzi, chipfuramabwe chake+ chiri muruoko. Akabva atanga kuenda kumuFiristiya wacho. 41 MuFiristiya wacho akaramba achiswedera pedyo naDhavhidhi, mutakuri wenhoo yake ari mberi kwake. 42 MuFiristiya wacho paakatarisa ndokuona Dhavhidhi, akatanga kumuzvidza nekuti aingovawo hake mukomana mutsvuku, akanaka.+ 43 Saka muFiristiya wacho akati kuna Dhavhidhi: “Ndiri imbwa here,+ zvauri kuuya kuzorwa neni netsvimbo?” MuFiristiya wacho akabva atuka Dhavhidhi nezita ravanamwari vake. 44 MuFiristiya wacho akati kuna Dhavhidhi: “Huya kuno uye ndichapa nyama yako kushiri dzedenga nemhuka dzesango.” 45 Dhavhidhi akapindura muFiristiya wacho achiti: “Uri kuuya kuzorwa neni nebakatwa nepfumo guru nediki,+ asi ini ndiri kuuya kuzorwa newe muzita raJehovha wemauto,+ Mwari weuto rakarongwa revaIsraeri wawashora.+ 46 Nhasi chaiye Jehovha achakuisa muruoko rwangu,+ uye ndichakuwisira pasi ndodimbura musoro wako; uye nhasi ndichapa shiri dzedenga nemhuka dzesango zvitunha zveuto revaFiristiya; uye vanhu vese vepanyika vachaziva kuti muIsraeri muna Mwari.+ 47 Uye vanhu vese vari pano vachaziva* kuti Jehovha haaponesi nebakatwa kana kuti nepfumo,+ nekuti kurwa ndekwaJehovha,+ uye achakuisai mese mumaoko edu.”+ 48 MuFiristiya wacho akabva agadzirira, akatanga kufamba kuti asangane naDhavhidhi, asi Dhavhidhi akakurumidza kumhanya achienda kunzvimbo yekurwira kuti asangane nemuFiristiya wacho. 49 Dhavhidhi akabva apinza ruoko rwake muhomwe yake, akatora dombo, akaripotsera nechipfuramabwe. Akarova muFiristiya wacho pahuma, uye dombo racho rakanyura muhuma yake, akawira pasi nechiso.+ 50 Saka Dhavhidhi akakunda muFiristiya wacho nechipfuramabwe nedombo; akawisira muFiristiya wacho pasi akamuuraya, kunyange zvazvo Dhavhidhi akanga asina bakatwa muruoko rwake.+ 51 Dhavhidhi akaramba achimhanya, akanomira pedyo naye. Akabva atora bakatwa remuFiristiya wacho+ akarivhomora mumuhara, akadimbura musoro wake naro kuti anyatsova nechokwadi chekuti afa. VaFiristiya pavakaona kuti munhu wavo ane simba akanga afa, vakatiza.+ 52 Varume veIsraeri nevarume veJudha vakabva vasimuka, vakatanga kushevedzera, uye vakatevera vaFiristiya kubvira kubani+ kusvikira kumagedhi eEkroni,+ uye vaFiristiya vakanga vaurayiwa vainge vakati katakata mumugwagwa kubvira kuShaaraimu,+ kusvikira kuGati uye kuEkroni. 53 VaIsraeri pavakadzoka kubva kunodzingirira vaFiristiya, vakapamba misasa yavo. 54 Dhavhidhi akabva atora musoro wemuFiristiya wacho akaenda nawo kuJerusarema, asi akaisa zvombo zvemuFiristiya wacho mutende rake.+ 55 Sauro paakaona Dhavhidhi achibuda kuti anosangana nemuFiristiya wacho, akati kuna Abhineri,+ mukuru weuto: “Abhineri, mukomana uyu mwanakomana waani?”+ Abhineri akati: “Chokwadi neupenyu hwenyu,* haiwa mambo, handizivi!” 56 Mambo akati: “Bvunza kuti mukomana uyu mwanakomana waani.” 57 Saka Dhavhidhi paakangodzoka kunouraya muFiristiya, Abhineri akamutora, akamuendesa pamberi paSauro aine musoro wemuFiristiya+ wacho muruoko rwake. 58 Sauro akabva ati kwaari: “Mukomana, uri mwanakomana waani?” Dhavhidhi achibva ati: “Ndiri mwanakomana wemuranda wenyu Jese+ wekuBhetrehema.”+
^ ChiHeb., “misasa yavo.”
^ ChiHeb., “makubhiti 6 nesipani.” Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Makirogiramu anenge 57. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Makirogiramu anenge 6,84. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ ChiHeb., “zvemukaka.”
^ Kana kuti “munhu wehondo.”
^ Kana kuti “shaya dzazvo.” ChiHeb., “ndebvu dzazvo.”
^ Aya matombo akaurungana.
^ ChiHeb., “ungano yese iyi ichaziva.”
^ Kana kuti “Neupenyu hwemweya wenyu.”
1 Samueri 17